Ogaden News Agency (ONA) – Gonder Duleedkeeda Dagaal Kudhexmaray Wayaanaha Iyo Xoogaga Isbahaysiha Hubaysan.
Gonder Duleedkeeda Dagaal Kudhexmaray Wayaanaha Iyo Xoogaga Isbahaysiha Hubaysan.
Posted by ONA Admin	/ September 6, 2015
Warar lagu kalsoon yahay oo naga soo gaadhaya Itoobiya ayaa tibaaxaya in dagaal culus uu ka dhacay Gobolka Gonder ee Kililka Axmaarada. Dagaalkan ayaa wuxuu dhex maray Ciidanka Gumaysiga Itoobiya iyo Xoogaga Isbahaysiga Hubaysan ee Arbanjooj, Gimbot 7 iyo Ciidanka Xoraynta Tigray ee looyaqaano marka lasoo gaabiyo TPDM oo isku dhinac ah.
Warkan ayaa intaas raacinaya in dagaalkan uu kadhacay Degmada Wolqayta gaar ahaan tuulada Dhajaj Abera meesha lagu magacaabo Silki Dhagiba. Khasaare laxaad leh ayaa lasheegayaa inuu kasoo gaadhay Ciidanka Gumaysiga dagaalkan. Xoogagan hubaysan oo iskugu jira Axmaaro iyo Tigrey ayaa weeraro aan kala joogsi lahayn kuhaya fadhiisimaha Ciidanka Gumaysiga.
Waxaa xusid mudan ineey xoogagan maanta duleedka Gonder weerarka kusoo qaaday ay labo bilood kahor cagta soomariyeen saldhigyadii ciidankii Wayaanaha uu kulahaa xadka Itoobiya iyo Eriteria gaar ahaan Kililka Tigrey. Dagaaladii u dambeeyay eey Isbahaysiga Jabhadan Hubaysan lagaleen Ciidanka Gumaysiga ayay guulo waawayn kusoo hoyiyeen taasoo usahashay ineey maanta soogaadhaan gobolada lagu tilmaamo ineey kamidka yihiin badhtamaha Itoobiya.
Faah faahinta qubanaha wararka Itoobiya iyo kolba wixii kasoo kordha xaalada murugsan ee Gumaysiga Itoobiya waxaan idiinku soo gudbin doonaa wararkaanaga dambe haduu ilaahay yiraahdo.